एमाले फुटेकै छैन,अधिवेशन नगरि चुनाव गरे मान्दिन - Sankalpa Khabar
नेपाली कांग्रेस वैधानिक संकटमा छ । पहिलो काम हाम्रो वैधानिकता दिलाउनु हो । वैधानिकता नभएको पार्टीले भोलि टिकट वाडयो भने त्यो मान्यता हुदैन । यसैले पहिलो काम नै अधिवेशन हो र मंसिरमा गर्छौं । केही ठाउमा विवाद छ । यसको मुल कारण सत्ता पाएपछि कहिले पनि नछोडेन ट्रम्प प्रवृत्ति देखियो । किनभने कांग्रेस अहिले पनि लोकतन्त्रको लडाइमा छ । किनभने अहिले पनि यो वा त्यो कोणबाट लोकतन्त्र माथि प्रहार भइरहेको छ । आफनो स्वार्थको लागि पार्टी,राष्ट्र र लोकतन्त्रलाइ जोखिममा राख्ने होइन ।यस्ता मान्छेसंग मेरो लडाइ छ । लोकतन्त्रको लागि आफुलाइ जोखिममा राख्ने मान्छे देशलाइ चाहिएको छ ।
थम राष्ट्रपति हुने वेलामा जब गिरिजावावुलाइ हुन नदिने अवस्था वन्यो । तब उहाले मलाइ वन भन्नुभयो । उहाले पहिलो नाम मेरो लिनुभयो । यसपछि रामशरण अनि रामवरण अनि शेरवहादुरको लिनुभयो । अनि मैले भने–गिरिजादाजु,प्रजातन्त्र अझै सुरक्षित छैन,म लोकतन्त्रको लडाइ मैदान मै लडन चाहन्छु । मैले उहिले भनेको कुरा आज साकार भयो नि । वन्दीपुर घटना देखियो । यो सत्ता संग मैले करङ भाच्नु परयो । टाढा देख्ने पो नेतृत्व । केपी ओलीले लोकतन्त्र खाल्टोमा हाल्न चाहन्थे । यसैले अहिले उ सदन वन्द गरिरहेको छ । मैले भनेको ठिक हो,मैले गरेको विघटन ठिक हो भन्ने देखाउन एमाले चाहन्छ । यसैले अहिले एमालेको निष्ठामा प्रश्न उठेको छ । किन एमाले संसदीय प्रणाली विफल वनाउन चाहन्छ ? यसैले उनलाइ हटाएर हामीले हाम्रो सभापतिलाइ प्रधानमन्त्री वनायौं । यसैले अब हाम्रो सभापतिले ओली जस्तै हुने कि लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्ने ? तावाबाट उम्किएर भुंग्रोमा पर्ने त हैन ? मलाइ मनमा शंका छ । यसैले अधिवेशन गरेर कांग्रेसलाइ लोकतान्त्रिक विधिमा ल्याउनुपरेको छ । जनताले छि नभन्ने,भरोशा गर्ने पार्टी वनाउनु परेको छ ।
म अझै साथीहरुलाइ भन्छु–एमालेसितको लडाइ अझैं कमजोर छैन,सामान्य छैन । एमाले अझै फुटेको छैन,सिंगै छ । एमालेसितको प्रतिस्पर्धा सजिलो छैन । यो कुरा मान्नु होला । यसको लागि कांग्रेस कति शसक्त हुनुपर्ने हो ? यस्तै खिजिमिजिको कांग्रेसले लडन सक्छ ?छातीमा हात राखेर सोच्नुस । यो मुलुकको भविष्यको पहरेदार हुन सक्छौं ? यसो भएकोले यो महाधिवेशन चानचुने कुरा होइन ।
महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्छ । यो महाधिवेशन नभइ कुनै कुरा हुन सकदैन । पहिलो काम नै कांग्रेसको शुद्धिकरण हो । यसैले नेपाली कांग्रेसले पुस्तान्तरण होइन,रुपान्तरणको खाँचो छ । कांग्रेस भित्रको विकृति विसंगति हटनुपर्छ । यो विशुद्ध लोकतान्त्रिक पार्टी,जनताले छि भन्न नसक्ने पार्टी वन्नुपर्छ ।
१७ मंसिर १३:१८
मुलुकमा जनमुखी र वैज्ञानिक शिक्षाको खाँचो छ -उपराष्ट्रपति पुन
१४ मंसिर १०:५०